कारबाही भोग्छु, कांग्रेसलाई साथ दिन सक्दिनँ : थापा - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका २९ बैशाख २०७८, 12:52 pm
वैशाख, पोखरा । २०५१ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा आएको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पार्टीगत नीति र अनुशासनप्रति निकै कट्टर मानिन्छ । तर पार्टीको इतिहासमै पहिलो पटक पार्टी नीति क्रस हुने अवस्था आएको छ ।
यो अध्यक्षज्यूलाई पनि थाहा छ । तर, उहाँले अहिले स्थानीय जनताले के भन्छन् ? हामीले खेपेका पीडा के छन् ? हामी के चाहन्छौं भन्ने हेरिदिनुभएन । हाम्रा आवाज र वाध्यतालाई पनि सुन्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर पार्टी नेतृत्वको निर्णय जनता र कार्यकर्तासँग जोडिएन । हाम्रा माग अर्कै छन् । हामीलाई समस्या अर्कै छन् । नेतृत्वले लाद्न मात्रै खोज्नुहुन्न ।
५१ सालदेखि संसद छिरेको जनमोर्चामा पहिलो पटक हृवीप उल्लंघन भएको छ, तपाईंको स्वार्थमा ठेस लाग्यो भन्छन् नि पार्टीकै नेताहरु ?
कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने योजना पनि होइन, भोलि मैले केही पाउने पनि होइन । केवल मेरो मन नमानेको हो र गठबन्धनमा समर्थन नगर्न मलाई स्थानीय दबाब पनि छ । त्यसैले यो कदम चाल्न बाध्य भएको हुँ । पार्टीले कारबाही गरे भाेग्नै पर्ला ।
औंला उठाउन पाइयो, तर न्यायोचित ढंगले हेनुपर्छ । हामीले तीन वर्षसम्म पृथ्वीसुब्बाको सरकारलाई समर्थन गर्दा औंला नउठ्ने, अस्ति २६ गते राजीनामा दिएपछि औंला उठ्नुपर्ने कारण छ जस्तो लाग्दैन । यो लाभसँग होइन, सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । हामी कांग्रेसलाई कम्तीमा २० वर्षसम्म सत्ताभन्दा बाहिर राख्न चाहन्छौं । कम्तीमा कम्युनिस्टहरुको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छौं ।
बिरामी भएर हस्पिटलमा जाँदा पनि नियोजित हुने, अर्को निर्णय गर्दा पनि नियोजित नै हुने, यो खास शंका मात्र हो । राजनीतिक भ्रष्टीकरण भएको मुलुकमा शंका गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर त्यस्तो कुनै कारण होइन, मेरो विवेक नमानेको हो ।